China Kids Jerseys Scrimmage Training Vests Football Vest Mesh Breathable Bibs maka Volleyball Soccer Bọọlụ Nkata emepụta na suppliers | RE-HUO
Jmụaka Jerseys Scrimmage Ọzụzụ Vest Football Vest Mesh Breathable Bibs maka Volleyball Soccer Basketball
Jikere ka mpi:Jiri akwa agba bọọlụ a dị iche iche maka egwuregwu egwuregwu. Nwere ike ịmata ndị otu egwuregwu na ndị mmegide nke ọma n'ọhịa.
Ala imewe:Ejiri polyester mee, bọọlụ bọọlụ ọ bụla nwere ike ịsachasị igwe, dị fechaa yana meghee oghere maka ikuku. Ọ dị mma iyi eyi, na-eme ka ị dị jụụ n'oge asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ.
Omenala imewe: Ọ bụ oghere - ka ị nwee ike ịhazi
Mere nke 100% polyester mercerization na abụọ-mpempe na-agbanwe waistband. Mfe itinye ma wepụ.
Typedị :dị: Uwe ọzụzụ Scrimmage
Echeta: OEM ọrụ
Njirimara: Na-eku ume ọkụ, Ọsọ ọsọ ọsọ, Plus size, Mgbochi nkwụ, Eco-friendly
Agba: Red / Orange / Pink / Light blue / Black / Fluorescence green / Purple / Green / Dark dark / Yellow / Gold / Silver / White / Lake blue
Nha: S / M / L / XL
Na ngwaahịa ọzụzụ uwe.
Maka ngwaahịa ọzụzụ vest, anyị MOQ bụ 50 iberibe, na ị nwere ike họrọ multiple nha na agba
Anyị nwekwara ọrụ ndị ahaziri iche
Nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ karịa usoro obibi akwụkwọ iji mee ka ọzụzụ ọzụzụ gị dịkwuo mma.
Send na-eziga gị imewe ka anyị na anyị ga-ebipụta ya dị ka gị arịrịọ, Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme ka a ọzụzụ vest imewe, i nwere ike izipu anyị gị logo ma ọ bụ echiche, na anyị mmebe nwere ike mezue imewe gị.
Anyị na-enye ahaziri aha na mkpado ọrụ, na-eme ọzụzụ vest na gị onwe gị na ika.
Sublimation ebipụta ngosipụta
Nke a bụ nha eserese anyị na-echekwa, anyị nwekwara ike hazie nha maka gị.
Agba: Anyị nwere ike ịhazi agba ahụ, naanị ị ga-enye akara agba Pantone ịchọrọ, mana anyị nwere opekata mpe maka agba agba ahaziri iche.
Akara: Anyị nwere ọtụtụ usoro obibi akwụkwọ: ihuenyo
ebi akwụkwọ, okpomọkụ nyefe-ebi akwụkwọ, dai dai sublimation obibi, embroidery wdg
Nke gara aga: Okenye - Egwuregwu ndị na-eto eto na-eme ka ndị otu egwuregwu Pinnies Sports Vest Soccer, Football, Basketball bibs
Osote: Ọzụzụ Bibs Ndị okenye na ụmụaka na-eku ume ngwa ngwa bọọlụ Pinnies Football Team Jerseys Vest for Sports Scrimmage Practice
Blank dobe ubu uwe Unisex T uwe elu N'ihi Y ...